Boosaaso:-Wararka hordhac ah oo naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta Gobol ka Bari ayaa sheegay in masuul ka tirsanaa Al-shabaab haysana jiray Gobolka Shabeellada dhexe laguna magaacabo Cabdiraxmaan Siiro iyo wadaad kale oo lagu magacaabo Sheekh Cabdul qaadir Muumin maalmo ka hor soo gaareen magaalada Badhan ka dib markii ay ka soo talaabeen dhinac S/lland iyagoo mudo 3 maalmood ahaa ku suganaa magaalada Badhan.
Ilo wareed aan la xiriirnay oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa noo xaqiijiyey in ay jirto in ay labadaan wadaad oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab ay u suurto gashay in ay soo gaaraan Buuraha Golis , ilaa hadda ma cada sababaha rasmiga ah ee ay ku soo gaareen 2-da masuul Buuraha Golis balse waxaa la filayaa in ay qayb ka tahay abaabulka iyo diyaar garowga ay rabaan ururka Al-shabaab in dagaal iyo weeraro hor leh ku qaadaan magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Imaanshaha 2 masuul ee ka tirsan ururka Al-shabaab ay yimaadeen Buuraha Golis ayaa ku soo beegmaysa ka dib khudbad dheer oo uu maalin ka hor Madaxweynaha Puntlland Dr.Cabdiraxmaan Faroole uu ku sheegay in ururka Al.shabaab ay sahan sadeen Buuraha Golis ayna u soo guureen sidaas darteedna laga doonayo dadka degan Buuraha Golis ee lagu soo guuray ee aan wanaag loogu soo guurin iyo dowllada Puntlland ay la dagaalamaan xooggga Al-shabaab ee ku sugan Buuraha Golis.
Ilo wareedkaan aan waraysanaya ayaa noo sheegay in xubnaha ka tirsan ururka Al-shabaab ee doonaya in ay soo galaan Buuraha Golis ay soo maraan degaano ay maamulaan S/lland si sahalana ay markaas ugu soo gudbaan dhinac Sanaag ka dibna ay u soo talaabaan Buuraha Golis oo ah hadafkooda koowaad . ilaa hadda dad badan ayaa is wiidiinayey sababta ay ururka Al.shabaab ay qarash iyo ciidan ay u soo galinayaan Buuraha Golis xili ay Gobollo badan oo ku yaal Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya oo ay ka talin jireen ururka Al-shabaab ay qabsadeen ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa Kenyaan oo gacan siinaya ciidamo Soomaali ah.